एथ्लेटिक्‍समा बाध्यकारी व्यवस्था र बुझ्नुपर्ने तथ्य ! - Khelpati
शुशील नरसिंह राणा ।
नेपाल एथ्लेटिक्स संघको पछिल्लो बिज्ञप्ती चर्चामा छ । एथ्लेटिक्सका ईभेन्ट्स गर्न संघले बाध्यकारी स्विकृतिको व्यवस्था गरेको छ । संघको स्विकृती बिना सञ्चालित प्रतियोगितालाई अवैधानिक ठहर हुने बताईएको छ । धेरैपछि संघले बिज्ञप्तीमार्फत आफ्नो उपस्थिती देखाएको छ ।
संघको निर्णयमा समर्थन-विरोधका स्वर उत्तिकै छन् । सामाजिक सञ्जाल टिका टिप्पणीले भरिएको छ । सिङ्गो खेल जिवन एथ्लेटिक्समा ब्यतित गरेको हिसाबले पछिल्ला घटनाले निकै दुखी छु ।
जन्मदेखि भोगाईसम्मका विभिन्न प्राकृतिक गतिविधिबाट एथ्लेटिक्स विकास भएको मानिन्छ । रन, जम्प अनि थ्रो विभिन्न खेलमा समावेश हुन्छ । त्यसैले एथ्लेटिक्सलाई खेलको जननी अथवा मदर अफ स्पोर्ट्स पनि भनिन्छ ।
विश्व एथ्लेटिक्स एशोसियसन (आईएएफ)ले कार्यान्वयनमा ल्याएको किड्स एथ्लेटिक्सको विधालाई फुटबल लगायत विभिन्न खेलले प्रयोगमा ल्याएका छन् । किड्स एथ्लेटिकसलाई धेरै खेलले आफ्नो खेल विकासका लागि अन्त्यन्तै प्रभावशाली विधिको रुपमा लिएका छन्, प्रयोग गरेका छन् ।
नेपाल एथ्लेटिक्स संघले आफ्नो बार्षिक क्यालेन्डरमा देश भित्र सञ्चालन हुने प्रमुख प्रतियोगितालाई सुचिकृत गर्ने, सदस्यता शुल्य लिने, प्रतियोगितामा प्रतिनिधि उपस्थित गराउने, प्रतियोगिता अन्तराष्ट्रिय वा संघको मापदण्ड अनुसार चलेको छ-छैन हेर्ने, त्यसको अभिलेख राख्ने, रुटलाई र नतिजालाई अन्तराष्ट्रिय स्तारमा प्रमाणिकरण गर्नेनै रहन्छ ।
वर्तमान समयमा काठमाडौं लगायत देशभर स्तरीय म्याराथन प्रतियोगिता सञ्चालन भईरहेका छन् । नीजि स्तरमा संचालन भईरहेको प्रतियोगिताको नतिजा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा कुनै मान्यता छैन । आयोजक आफैले ठुलो दुख, सुख गरेर प्रतियोगिता गर्छन् । कार्यक्रम सकिए लगत्तै अर्को बर्षका लागि प्रायोजकको खोजीमा दौडधुप सुरु गर्छन् ।
निकै कष्ट, असहजता र बिषमताको बाबजुत प्रतियोगिता सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ ।
अझ खेलका दौरान रुटका बारेमा विवाद सिर्जना भईरहेको देखिन्छ । नतिजाका बारेमा विवाद सिर्जना हुन्छ ।
बर्षभरी झरी, जोडो, गर्मी नभनी सामान्य आहाराको भरमा मेहनत गरिरहेका खेलाडीहरु नतिजामा विवाद उत्पन्न भएपछि निराश भएर घर फर्कनु परेको तितो यथार्थ हामीसंग छ ।
सबै विवादको निराकरण राष्ट्रिय संघको जिम्मेवारी बोकेको नेपाल एथ्लेटिक्स संघले लिनुपर्ने हो । ढिलै भएपनि यसलाई व्यवस्थित गर्ने सुचना अध्यक्ष ज्यूको हस्ताक्षर सहित आधिकारिक रुपमा आएको छ । संघको कदम र निर्णयको हामीले स्वागत गर्नुपर्छ ।
प्रश्न आउछ, के कुनैपनि एथ्लेटिक्सको कार्यक्रम आयोजना गर्दा संघको स्विकृती लिनुपर्ने बाध्यकारी हुन्छ ?
हैन, यो नियम संसारमा कतैपनि लागु हुदैन ।
संसारभर एथ्लेटिक्सका अधिकांश प्रतियोगिता स्वत स्र्फुत रुपमा सञ्चालन भईरहेका हुन्छन् । कतिले राष्ट्रिय संघसंग मान्यता लिन्छन्, कतिले आफ्नै मनोरञ्जन तथा स्वास्थ्य चेताना अभिवृद्धिको हिसाबले सञ्चालन गर्छन् ।
कतिले आफ्नो देशको राष्ट्रिय संघ वा अन्तराष्ट्रिय संघको स्विकृति समेत लिदैनन् । विश्वमा ४ सय बढी रोड रेस तथा म्याराथन आयोजक सदस्य भएको एम्स (एसोसियसन अफ ईन्टरनेश्नल म्याराथन तथा डिस्टेन्स रेस)को सदस्यता लिएर प्रतियोगिताको रुट र नतिजालाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको प्रमाणिकरण गर्ने तथा प्रतियोगिताको अन्तराष्ट्रिय स्तरमा बिज्ञापन तथा बजारिकरण समेत गर्न सक्छन् ।
नेपालमा समेत संघको नजर नपुगेका धेरै जिल्लामा भएका एथ्लेटिक्सका प्रतियोगिताले राष्ट्रको मुलधारमा बर्षेनी सयौं नयाँ प्रतिभा पठाईरहेको तथ्यलाई नकार्न नमिल्ला ।
पुन एक पटक घरेलु प्रतियोगितालाई व्यवस्थित बनाउँदै जाने संघको निर्णयलाई स्वागत गर्दै बिद्धान, उर्जाशिल र आफ्नो जिवन एथ्लेटिक्स खेलमा बिताएका अन्यन्त संवेदनशिल नेपाल एथ्थलेटिक्स संघका नयाँ कार्यसमितिका सदस्यलाई सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
खेलकुदमा अब कस्तो नेतृत्व ?